3 Siyaabaha kaabta iPad hor CUSBOONAYSIINTA in macruufka 9
On Sept 16, 2015, ee macruufka ugu filayo 9 dambeyntii Isbahysiga soo baxay, laakiin waa mid aad u weyn oo aad iPad. Waxa aad leedahay doorasho aan ahayn in ay tirtirto music, video, sawiro iyo files dheeraad ah oo bilaash ah ilaa meel. Ma doonayo in aan waayi files kuwanu? Ha welwelin. Gurmad iPad in computer ama iCloud hore Waxaad awoodi kartaa. Halkan, ee qodobkan, waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego 3 siyaabood in gurmad iPad leh ama aan lahayn Lugood.
Habka 1. kaabta iPad in Computer la MobileTrans
Habka 2. kaabta iPad in Computer via Lugood
Habka 3. Samee kaabta iPad la iCloud
Kaabta iPad photos, music, video, sawiro iyo iMessages 1 click!
1 Click in gurmad iPad audio aan iibsaday iyo video iyo sidoo kale kuwa ku iibsaday.
Kaabta iPad Photo Library iyo Camera Roll in computer.
IPad xiriirada kaabta la email, magaca shirkada iyo faahfaahin dheeraad ah info.
IMessages dhoofinta iyo taariikheed ee iPad in computer u gurmad.
Si fiican u shaqeeyaan iPad, New iPad ayaa, iPad bandhigay isha, iPad mini, iPad mini bandhigay isha iyo iPad macruufka orodka hawada 5/6/7/8/9, iyo iPhone 6S Plus / iPhone 6S.
An macruufka orodka iPad 5/6/7/8
A Windows ama Mac computer la Lugood rakibay
Tallaabada 1. Run Wondershare MobileTrans kombiyuutarka. In ay suuqa kala aasaasiga ah, u tag dib My Phone hab. Markaas, xiriiriyaan iPad in computer la cable USB ah. Si guul leh la ogaado Marka, aad iPad la soo bandhigi doonaa bidixda ee suuqa kala gurmad.
Tallaabada 2. Sax faylasha aad rabto in aad gurmad dhexe ee suuqa kala. Guji Start Copy in gurmad photos, music, video, xiriirada, jadwalka iyo iMessages ka iPad in computer. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka oo dhan, hubi iPad xiran yahay.
Tallaabada 3. By default, gurmad iPad faylka waa la badbaadin doonaa jooga meelaha soo socda:
Ka dhigaysa Wondershare MobileTrans waxaa aad u sahlan in ay gurmad iPad in computer, laakiin ma ahan lacag la'aan ah. Haddii aad raadineyso weeyna freeware ah in la sameeyo gurmad iPad, Lugood shaki la'aan waa doorasho wanaagsan. Waxay kaa caawinaysaa in goobaha gurmad, wallpapers, app, farriinta, iyo in ka badan. Hoos waxaa ku qoran tilmaan faahfaahsan oo ku saabsan sida loo raad raac iPad la Lugood.
ah Apple cable USB
Sida loo gurmad iPad la Lugood
Tallaabada 1. Ku rakib Lugood kombiyuutarka.
Tallaabada 2. koronto cable USB ah oo wuxuu galay in ay ku xidhmaan aad iPad in computer.
Tallaabada 3. Ka dib markii la ogaado, aad iPad la soo bandhigi doonaa galeeysid bidix ee Lugood. Riix si aad iPad hoos AALADAHA .
Tallaabada 4. maamulka guddi iPad muujinaysaa ilaa on xaq. Guji ka Kooban tab.
Tallaabada 5. Tag qaybta kaabta iyo guji Back Up Hadda .
Tallaabada 6. Or, aad sax karaan sir gurmad deegaanka iyo buuxi sirta ah, si ay u ilaaliyaan gurmad ah. . Markaas, raad raac habka si toos ah
Tallaabada 7. In geeddi-socodka gurmad ah, ma barkinta aad iPad.
Fiiro gaar ah: By imayl iPad, wuxuu kaa badbaaadin karaa warbixin-shaqsiyeedkaaga ammaan ah. Laakiin waa in aad xusuusan sirta ah.
Samee kaabta iPad la iCloud
Lahayn cable laga heli karaa gacanta USB? Dareen dhib badan in ay gurmad iPad in computer? Waxaad isku dayi kartaa iCloud. Waxay awood u aad si toos ah taariikhda iibsaday raad raac ah oo music, filimada, TV muujinaysaa, buugaagta, barnaamijyadooda, Roll Camera, goobaha, xogta app, iMessages oo dheeraad ah oo ka iPad in hadhaysaa server aan computer. Si kastaba ha ahaatee, waxa kaliya ee ay bixiyaan 5GB free aad kaydinta. Hadii aad ka mid ah kaydinta, aad leedahay si ay ugu bixiyaan in ka badan.
iPad An leh batari ku filan,
An account iCloud la kaydinta ku filan
Sida loo gurmad iPad in iCloud
Tallaabada 1. aad iPad, tuubada Settings > iCloud
Tallaabada 2. Tubada Kaydinta & kaabta > kaabta Hadda .
Faa'iido 1. 1 clik in gurmad iPad aan Lugood
3. Camera kaabta Roll oo Photo Library 1. Free
2. Ugu xogta iPad ee kaabta 1. Free
3. Xog badan ee kaabta in hadhaysaa
Qasaarooyinka 1. Ma u baahan tahay inaad bixiso
2. Ma goobaha aan gurmad, wallpaper, xogta app, iwm 1. Qaado waqti aad u badan
2. Ma gurmad karaa audio aan iibsaday iyo video 1. Ma u baahan tahay shabakad WiFi on iPad
2. Can aan gurmad audio aan iibsaday iyo video
Xogta laga Old iPhone wareejiyo iPhone 6
3 Hababka si ay u gudbiyaan Android inay iPhone 6
1 Click si ay u gudbiyaan Samsung si iPhone 6
Top 15 Apps ee macruufka 8
Si fudud Ku rakib macruufka 8 on iPhone / iPad / iPod taabashada
Bedelka Music iyo Photos ka iPod in iPad
3 Siyaabaha kaabta iPod taabto ka hor macruufka 8 Hagaaji
5 Talo in dardar macruufka 8
Sida loo hoos ka macruufka 8 ilaa macruufka 7
2 Siyaabaha dayactir Apple White Screen of Death
Sida loo hagaagsan Music inay iPad la Loss No
> Resource > iPad > 3 Siyaabaha kaabta iPad hor CUSBOONAYSIINTA in macruufka 8